Ururada Mucaaradka ah & Jabhadaha Itoobiya ka soo horjeeda oo Kulan Muhiim Ah Yeeshay. | ogaden24
Ururada Mucaaradka ah & Jabhadaha Itoobiya ka soo horjeeda oo Kulan Muhiim Ah Yeeshay.
Waxaa shirar isdaba joog ah oo dhinaca khadka isgaadhsiinta ah isugu yimid dhamaan ururada mucaaradka ah ee maamulka guracan ee Itoobiya kasoo horjeeda, waxayna kulamadu socdeen saacado badan oo laga arinsanayay arimaha Itoobiya.
Ururadan oo isugu jira kuwo xornimo doon ah iyo kuwo xuquuq doon ah ayaa kumidaysan sidii ay shucuubta dulman uga dulqaadi lahaayeen rajiimka Addis Ababa, kaas oo gumaad joogta ah kuhaya dadka shacabka ah isla markaana aan wadanka u ogolayn hay’ado samafal iyo warbaahin madax banaan toona.
Kulanka qaybtiisii hore oo ay galeen 14 urur oo dhawaan lagu yagleelay magaalada London ee cariga Ingiriiska, ayaa la isku waydaarsaday xogo muhiim ah oo dhinaca dadkii iyo dalkii gumaysigu uu haystay ah, waxaana wadanka Ogadenia kawar bixiyay Mudane Xassan Macalim oo Jabhada ONLF wakiil uga ah ururadaas mucaaradka ah isla markaana ah Hogaanka Warfaafinta ee JWXO.
Halgame Xassan Macalim ayaa si qoto dheer uga warbixiyay xaalada dhabta ah ee Ogadenia kajirta gaar ahaan maxaabiista lagu bahdilo Ogadenia ee caalamka loosheegay in lasiidaayay balse xabsiyo cusub lagaliyay.
Mudane Xassan Macalim ayaa sheegay in dhaqanka taliska wayaanuhu uusan aqbalaynin sinaan iyo cadaalad taasna ay keentay in dadkii saxaafada loosoo bandhigay ee in lasiidaynayo lasheegay lagu celiyo bahdil iyo xabsiyo hor leh, iyaga oo waliba xaalad adag oo caafimaad kujira.
Dhinaca kale wakiilada ururada ayaa sidoo kale soo bandhigay warbixino dhaadheer, waxaana gaba gabadii lagu balamay hirgalinto qodobo muhiim ah oo wax tar u leh halganka loogu jiro xoraynta shucuubta kala duwan ee Itoobiya lagu gumaysto.